INONA no voankazo azo atao fanafody, anadiovan-javatra, amonoana mikraoba, ary anamboarana zavatra fanatsarana tarehy? Ny voasarimakirana. Azo hanina sy atao ranom-boankazo koa izy io, ary azo akana lohamenaka. Na ny mijery azy aza mahafinaritra. Tsy lafo izy ary misy azy eran-tany. Mety hisy azy io koa ao an-dakozianao ao.
Voalaza fa tany Azia Atsimoatsinanana no nisy azy io voalohany, ary avy eo niely tsikelikely niankandrefana tany amin’ny faritr’i Mediterane. Toetany antonontonony no mety aminy. Maniry tsara àry izy any Arzantina, Espaina, Italia, Meksika, ary na atỳ Afrika sy any Azia aza. Mamokatra voasarimakirana 200 ka hatramin’ny 1 500 isan-taona ny fotony iray, arakaraka ny karazany sy ny toerana aniriany. Misy mandavantaona izy io satria samy manana ny fotoana amelanany ny karazana voasarimakirana.
Tonga tany Italia
Maro no tsy mino hoe namboly voasarimakirana ny Romanina fahiny. Misy asa soratra milaza fa namboly karazana voasary mitovitovy amin’ny voasarimakirana lehibe ry zareo. Niresaka momba an’io karazana voasary io i Pline Zokiny, mpahay tantara romanina, tao amin’ilay bokiny hoe Tantaran’ny Zavaboary (anglisy). Misy anefa manam-pahaizana milaza hoe nampiasa voasarimakirana ny Romanina. Maro mantsy ny sary hoso-doko sy sary vita tamin’ny fitaratra sy vato madinika nahitana ny sarin’io voankazo io. Nisy an’izany, ohatra, tao amin’ny trano iray hitan’ny mpikaroka tao Pompéi. Nantsoina hoe Ilay Trano Saham-boankazo izy io, ary voaravaka hoso-doko misy sarina zavamaniry isan-karazany, toy ny voasarimakirana. Mbola voankazo vahiny izy io tamin’izany, ka tsy nampiasaina afa-tsy tamin’ny fanafody. Tsy fantatra koa raha mora nambolena izy io ary raha niely be na tsia.
Ela kokoa ny vanim-potoana mafana ary tsy dia mangatsiaka ny ririnina any amin’ny nosin’i Sisila ka any no tena mpamokatra karazam-boasary, anisan’izany ny voasarimakirana. Misy voasarimakirana tsara karazana koa anefa ambolena any an-toeran-kafa, indrindra any amoron-tsiraka.
Eo atsimo kelin’i Naples ilay tanàna kanto atao hoe Sorrento, ary eo atsimony ny morontsiraka tsara tarehin’ i Amalfi, izay mirefy 40 kilaometatra. Misy helodranomasina rehefa miala kely eo, ary misy tanàna maro eny, toa an’i Amalfi sy Positano ary Vietri sul Mare. Saro-piaro amin’ny voasarimakirany ny fanjakana any Sorrento sy any amoron-tsirak’i Amalfi. Asiany fanamarinana momba ny toerana niavian’ilay vokatra àry ny voasarimakirana avy any aminy. Volena an-tanantohatra eny amin’ny tehezan-tendrombohitra izy ireny ary tena azon’andro tsara ka be ranony sy manentohento erỳ.
Afaka mamboly voasarimakirana ianao, na tsy manana toerana malalaka aza. Azonao ambolena anaty tavim-boninkazo ny voasarimakirana botry kely, ary atao eo amin’ny lavarangana azon’andro tsara. Mandravaka an’ilay toerana izy amin’izay. Toerana azon’andro nefa tsy be rivotra no tena mety aminy, ary tsara kokoa raha akaiky rindrina. Tokony hosaronana izy na ampidirina any an-trano, rehefa mangatsiaka be ny andro amin’ny ririnina.
Tsy sakafo fotsiny
Tia mampiasa voasarimakirana ve ianao? Misy manisy silany kely amin’izy io ao anaty dite. Ilaina amin’ny fanamboarana mofomamy koa ny hodiny ivelany sy ny ranony. Angamba ianao manapotsitra azy io rehefa hanao ranom-boankazo. Tia mampiasa azy io ny mpahandro matihanina eran-tany. Efa nampiasa voasarimakirana mba hamonoana mikraoba na hanalana tasy ve anefa ianao?
Misy manosotra voasarimakirana amin’ny hazo fitetehana sakafo, mba hanadiovana azy io sy hamonoana mikraoba. Misy koa manala tasy sy manadio amin’ny ranom-boasarimakirana sy karibonetra, fa tsy amin’ny ranon-javely. Voalaza koa fa manala ny fofona ratsy ao amin’ny vata fampangatsiahana na masinina fanasam-bilia ny voasarimakirana.
Be asidra sitirika ny voasarimakirana ka miaro ny sakafo tsy ho simba sady mamparikivikivy ny sakafo na ny zava-pisotro. Misy zavatra mampivaingana ny sakafo koa ao amin’ny hoditra ivelany sy anatiny amin’ny voasarimakirana ka ampiasain’ny orinasa mpamokatra sakafo. Azo akana menaka koa ny hoditra voasarimakirana ka ampiasaina hanamboarana sakafo sy fanafody ary zavatra fanatsarana tarehy. Tsy ho voatanisa ny ilana ny voasarimakirana. Tena tsara tarehy sy tsara tsiro ary ahavitan-javatra maro tokoa izy io!
Tena ilain’ny vatana ny vitaminina C satria mampitombo sy mahasalama. Misy azy io koa ny sakafo maro, toy ny anana, voatabiha, poavrao, ary frezy. Ny karazam-boasary anefa no tena be vitaminina C, ary anisan’izy ireny ny voasarimakirana. Miankina amin-javatra maro ny habetsahan’ny vitaminina C ao amin’ny voasarimakirana. Eo, ohatra, ny toetrandro, ny fahamasahany, ary na ny toeran’ilay voa eny ambony hazo aza.
Mila vitaminina C 100 miligrama eo ho eo ny olon-dehibe salama tsara, any amin’ny tany sasany. Misy ny antsasaky ny vitaminina C ilain’ny olon-dehibe iray, ao anatin’ny iray andro, ny voasarimakirana iray salasalany.